Aqoon kororsi oo loo qabtay Ardayda kuliyadda Kheyradka Cilmiga dhulka ee Jaamacadda Banaadir Daawo Sawirro!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Aqoon kororsi oo loo qabtay Ardayda kuliyadda Kheyradka Cilmiga dhulka ee Jaamacadda Banaadir Daawo Sawirro!!
Aqoon kororsi oo loo qabtay Ardayda kuliyadda Kheyradka Cilmiga dhulka ee Jaamacadda Banaadir Daawo Sawirro!!
Xarunta Jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay aqoon isweydaarsi looga hadlayey xoojinta iyo dhiirigelinta ardayda wax ka barata kuliyadda Cilmiga kheyraadka dhulka (Geo-Sience) oo ka mid ah kuliyadaha ugu muhiimsan Jaamacadaas.
Munaasabadan oo uu soo qaban-qaabiyey maamulkan kuliyadda Geo-Sience ayaa waxa ka qeyb galay masuuliyiin sare oo ka tirsan Jaamacadda Banaadir, arday, macalimiin iyo xubno kale.
Kuliyaddan oo ah tii ugu horeysay nooceeda ee dalka laga hirgeliyo tan iyo burburkii dowladii Kacaanka ayaa waxaa lagu bartaa sidii loo saari lahaa loogana faa’iideysan lahaa kheyraadka dhulka ka buuxa, sida, Gaaska Batroolka iyo noocyada kale ee shidaalka, macdanta, dhagxaanta qaaliga ah, dheymanka, dahabka iwm.
Hormuudka Kuliyadda Geo-Sience ee jaamacadda Banaadir Ing. C/qaadir Abiikar Xuseen ayaa ku soo bandhigay munaasabadan Buugaag fara badan iyo dhagxaan iyo macdano kala duwan oo dalka dibediisa uu ka keenay kuwaasoo loogu talo galay in lagu xoojiyo kuliyadda oo muddo kooban jirta si ardayda wax ka barata kuliyaddan kor loogu qaado aqoontooda.
Guddoomiyaha Jaamacadda Banaadir Dr. C/risaaq Axmed Dalmar oo hadalo furitaan ah ka jeediyey aqoon-isweydaarsigan ayaa ku amaanay hormuudka kuliyadda Geo-Sience dedaalka uu ugu jiro horumarinta kuliyadda iyo ardayda wax ka barata intaba, isagoo xusay dalal aad uga fog Somalia uu ka soo safriyey Buugaagta iyo aqabka waxbarasho ee halkaas lagu soo bandhigay si ardaydu ay uga faaiideystaan.
“Soomaaliya waxaa ka buuxa kheyraad kala gedisan oo bad iyo beriba leh, sida beeraha, kalluumeysiga, xoolaha, waxaa kale oo la ogaaday in shidaal noocyo badan leh iyo macaadin qaali ah uu dalkeena leeyahay, balse nasiib daro dadkeena wey ka baahan yihiin sababtoo ah dadkii aqoonta u lahaa soo saarideeda ayaa nagu yar, adinka ayaa la idinka rabaa inaad kaalintaas buuxisaan” ayuu yiri gudoomiye Dalmar oo la hadlayey ardayda aqoon isweydaasrigan loo qabtay.
Dr. Dalmar ayaa ku dheeraaday muhiimada uu leeyahay barashada cilmiga dhulka iyo sida umaddaha caalamka qaarkood ay ugu liibaaneen markii ay la soo baxeen kheyraadka dalalkooda ku jiray, isagoo kula dardaarmay ardayda wax ka barata kuliyadda (Geo-sience) iney ku dedaalaan waxbarashadooda si ay dalkooda iyo dadkooda wax u taraan.
Hormuudka Kuliyadda cilmiga kheyraadka dhulka Ing. C/qaadir Abiikar Xuseen oo isna ka hadlay munasaabadan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay heerka fiican ee ay maanta soo gaareen ardayda wax ka barata kuliyaddaas oo labo sano jirsatay.
“Soomaaliya waxaa laga helay bad iyo beri shidaal u badan Gaas iyo bartool, aniga waxaan la shaqeeyaa Wasaaradda batroolka maalin kasta waxaa noo yimaada shirkado cusub oo raba iney soo saaraan shidaal, hase ahaatee waxaa la la’yahay dadkii Soomaaliyeed ee howshaas la wadi lahaa, shaqaddana waxay ka mid tahay kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka, laakiin Soomaalida dadka aqoonta u leh ayaa ku yar” ayuu yiri Ing. Abiikar oo dhinaca kale ardayda sharaxaad ka siiyey Buugaag, dhagxaan iyo macaadiin uu halkaas ku soo bandhigay kuwaasoo loogu talo galay in ardayda kuliyaddaas ay kaa faaiideystaan.
Waxaa kale oo halkaas hadalo dhiiregelin ah ka soo jeediyey Ing. Maxamed C/qaadir, Ing. Liibaan Maxamed. Ing Maxamed C/raxmaan Abuukar iyo Ing Axmed Shiikh oo ka tirsan macalimiinta kuliyadda cilmiga kheyraadka dhulka.
Jaamacadda Banaadir oo ka kooban 12 kuliyadood ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2002, waxayna sanadba sanadka dambeeya ku talaabsaneysaa horumaro kala gedisan oo la xiriira dhinaca kobcinta tacliinta sare.
Previous PostDaawo muuqaal: Donald Trump Muxuu ka yidhi hogaamiyaasha Sadaam Xuseen, Qadaafi iyo Bashaar!! Next PostMadaxweynaha Soomaaliya oo loo raadinayo Musharixii ka Guuleesan lahaa iyo Shariif Sakiin Sh. Xasan oo wada Qorsho halis ku ah Dalka!!